Puntland oo 14 Maxbuus budhcad badeeda ku wareejisay Somalia | Berberanews.com
Home WARARKA Puntland oo 14 Maxbuus budhcad badeeda ku wareejisay Somalia
Muqdisho-(Berberanews)-Dowladda federalka Somaliya ayaa maanta Puntland kala wareegtay 14 maxaabiis budhcad badeed ah oo muddo ka dhow 10 sano ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada Garowe ee gobolka Nugaal.
Wasiirka caddaalada Soomaaliya oo shalay soo gaadhay Garowe ayaa lagu wareejiyay maxaabiista kadib is fahan dhexmaray iyaga iyo Puntland oo maxaabiista gacanta ku haysay tan iyo 2012.
Maxaabiistaan ayaa loo wareejindoonaa xabsiga dhexe ee Xamar, sida ay HOL u sheegeen xildhibaano ka tirsan Galmudug oo muddo ka shaqeynayay in maxaabiista loo wareejiyo deegaanada ay kasoo jeedaan Galmudug.
Taliyaha ciiddanka asluubta Puntland sareeye guud Cali Nuur Cumar ayaa sheegay in maxaabiistaan ay xabsiyada u dhiman ku dhameysan doonaan xabsiga dhexe ee Xamar, isagoo sheegay mid kamid ah maxaabiista inuu ka hadhay oo uu codsaday inuu xabsigiisa ku dhameysanayo xabsiga Garowe.
Taliyaha ayaa sheegay sababta maxaabiista budhcad badeeda loogu wareejiyay xabsiga dhexe ee Xamar, iyagoo kasoo jeeda Galmudug, in ay tahay, in aan la ogolayn in budhcad badeeda lagu hayo xabsiyo aan ahayn kuwa kuyaala Garowe, Bosaso, Muqdisho iyo Hargeysa.
Wuxuu taliyuhu sheegay in ay Puntland xirfado kala duwan bartay maxaabiistaas muddadii ay ku jireen xabsiyada, isagoo sheegay in xirfadahaas ay ka caawindoonaan marka ay xorriyadooda helaan.
Previous articleOrdogan oo baajiyay colaad dagaal oo dhexmarta Yugrayn iyo Ruushka
Next articleSucuudiga oo qoorta ka jaray saddex askari